Mutambi anoita "simulator" achishandisa SteamOS uye DiRT Rally | Linux Vakapindwa muropa
Mutambi akagadzira tafura iyo yaakabatanidza komputa, uye kumwe kudzora kwekutyaira senge redhiraivhi uye giya lever gadzira yako "simulator" . zvakabatanidzwa zvese uye mhedzisiro yekupedzisira inogona kuonekwa muvhidhiyo inovhara ichi chinyorwa. Ichokwadi ndechekuti vamwe vanhu havashaye fungidziro yekugadzira yavo yavo DIY mapurojekiti.
Sezvandinotaura, chigadzirwa chinobatanidza timu ine vhiri rekufambisa uye giya lever sekutonga, pamusoro pekuisa iyo inozivikanwa SteamOS inoshanda sisitimuIwe unoziva, Valve's GNU / Linux kugovera yakanyatsogadzirirwa iyo multimedia uye vhidhiyo mutambo wepasi rese nekuda kwekubatanidzwa kweiyo Steam ecosystem kubva kwazvinogona kutenga zvemukati nekushandisa magiraidhi madhiraivhu uye uwane kugona kwakanyanya panguva yemutambo.
Kubva ipapo iwe unogona kuisa, pakati pemamwe akawanda mazita, inozivikanwa Rally racing mota simulation mutambo wandambotaura kare: DiRT Rally. Asi iwe unogona kumisikidza mimwe mitambo yakawanda yekutyaira yakadai seF1 2017 kana chero imwe, wochinja dhizaini yeiyi gamer kune imwe yaunogona kufunga nezvayo uye yakakodzera. Ungatsunga? Kunyangwe gadzira mamwe magadzirirwo anoitirwa mamwe marudzi emitambo yemavhidhiyo asiri kutyaira. DIY inonakidza kwazvo, uye kunyangwe kana isiri iyo hombe dhiri, ini ndinogara ndichida kutarisisa kune aya marudzi emapurojekiti.
Nenzira, nezve iyo Hardware Iwe wakashandisa ASUS H110S2 / CSM mamaboard, Intel G4500 CPU, Silverstone NT07-115X fan, G.Skill Ripjaws 8GB RAM module, Samsung 950 Pro M2 SSD hard drive, 7 ″ LCD skrini, Pimoroni Picade controller, 2 x 3w vatauri (Adafruit), potentiometer uye mabhatani eanodzora, nezvimwe. Kuti uwane ruzivo rwakakwana iwe unogona kuenda kune iyo projekiti peji pa Github.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Mutambi anoita "simulator" achishandisa SteamOS uye DiRT Rally
Ini ndinofungidzira kuti zvinogona kuitwa neyakajairwa linux distro uye kutamba SuperTuxKart uye mamwe maGNU / Linux mota racing mitambo kana emulators (semuenzaniso: Kunze Kumhanya, Chase HQ).
Steam inondipa chimwe chinhu ine DRM yakawanda.